Azia Atsimo atsinanana : Mitoraka bilaogy momba ny baolina kitra · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo atsinanana : Mitoraka bilaogy momba ny baolina kitra
Voadika ny 02 Oktobra 2010 18:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, မြန်မာ, Español, English
Sarin'i Nhy Nguyen avy amin'ny pejy Flickr nampiasàna ny CC License Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
Betsaka ireo bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo atsinanana izay manome vaovao lehibe farany sy ara-potoana mikasika ireo lalao baolina kitra sy ny fandaharam-potoana any amin'ny faritra. Tamin'ny alalan'ny mailaka, niresadresaka tamin'i Erick Bui avy amin'ny baolina kitra any Vietnam ny tenako sy i Chamroeun ao amin'ny Football Roubroum any Kambodza mikasika ny fitorahana bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo atsinanana.
Nilaza fohifohy mikasika ny tantaran'ny baolina kitra any Vietnam i Erick.
Tsy azo iadian-kevitra fa ny baolina kitra no fanatanjahan-tena matanjaka sy be mpanohana indrindra any Vietnam. Nanomboka tamin'ny taona 1980 ny fifaninana V-League isan-taona.
Tamin”i Vietnam nizara roa ho lasa Vietnam Avaratra sy Vietnam Atsimo , dia nanjary nisy ekipa roa ihany koa …Taorian'ny nikambanan’ i Vietnam tamin'ny taona 1975, nijaly ela tsy nivoatra mihitsy ny baolina kitra Vietnamiana. Tamin'ny taona 1991 no niatrika lalao iraisam-pirenena voalohany indrindra ny ekipam-pirenena Vietnamiana.
Nanao ezaka lehibe mihitsy ny baolina kitra Vietnamiana nanomboka tamin'izay . Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo tsara indrindra eo amin'ny faritr'i ASEAN ny ekipam-pirenena Vietnamiana sy ny V-League.
Milaza ny antony itazonany ny bilaogy amin'ny teny Anglisy mikasika ny baolina kitra any Vietnam i Erick.
Mifanohitra amin'ny hamaron'ny isan'ny tranonkala mikasika ny baolina kitra amin'ny teny Vietnamiana, vitsy ihany ireo tranonkala amin'ny teny Anglisy mikasika ny baolina kitra eo an-toerana ao amin'ny aterineto. Izany no antony nahatonga ahy nanomboka ny bilaogy mikasika ny baolina kitra any Vietnam mba hanampy ny olona hahalala kokoa mikasika ny baolina kitra eo amin'ny fireneko. Manana namana maro any am-pitan-dranomasina aho izay mpankafy baolina kitra ihany koa. Matetika izy ireo no manontany ahy mikasika ny baolina kitra Vietnamiana satria hitan'izy ireo fa sarotra ny mahita vaovao amin'izany. Eo am-pijerena izany zavatra izany dia nihevitra aho fa ho rohy lehibe hampifandray an'i Vietnam amin'izao tontolo izao ny bilaogy mikasika ny baolina kitra amin'ny teny Anglisy. Sady tena tia aho no manana ny fahaizana ilaina mikasika ny baolina kitra ka dia mahafinaritra ahy ny mitoraka bilaogy momba ny baolina kitra Vietnamiana.
i Chamroeun no Kambodjiana voalohany mpitoraka bilaogy mikasika ny baolina kitra. Ao anatin'ny bilaoginy , Cambodia Football Roubroum, mizara ny vaovao mikasika ny lalao baolina kitra any Kambodza izy
Tamin'ny volana Jolay 2008 no nanaovako ny bilaogiko manokana. Ny hanaparitaka ny vaovao mikasika ny baolina kitra Kambodjiana no tena tanjoko.
Hitako ihany koa fa manana tetikasa tsaratsara kokoa mikasika ny baolina kitra ireo firenena roa mpiray vodirindrina amintsika , Thailand sy Vietnam. Tsara karama ireo mpilalao. Nefa any Kambodja, tsy feno tsara ny fepetra ho an'ireo mpilalao baolina kitra. Milalao maina na kely karama ny ankamaroan'izy ireo . Na izany aza, niova be ny baolina kitrantsika tao anatin'ny dimy taona. Amin'izao isika efa manana ligy matihanina izay tohanan'ny orinasa Vietnamiana iray.
Mifandray amin'ny bilaogy hafa miresaka baolina kitra ao amin'ny faritra ihany koa i Erick sy i Chamroeun. Ireto tranonkala ireto no atoron-dry zareo: Jakarta Casual ho an'i Indonezia sy Singapore, Thai Port Football Club ho an'i Thailand, S-league: Facts & Figures ho an'i Singapore, Filipino Football ho an'i Filipina , Soccer Myanmar, Foul avy any Malezia ary aseanfootball.org izay manome ireo vaovao farany mikasika ny fanatanjahan-tena avy any amin'ny faritra . Mifandray amin'ireo tranonkala mikasika ny baolina kitra eo an-toerana ihany koa ireo bilaogy ireo.
Miresaka mikasika ny filokana eo amin'ny fanatanjahan-tena izay tena olana goavana any Malezia nandritra ny volana vitsivitsy izao i Haresh Deol, ilay mpitoraka bilaogy mamahana ny bilaogy Foul from Malaysia.
Sakanan'ny antoko maro ny resaka fampanarahan-dalàna ny filokana eo amin'ny fanatanjahan-tena. Tsy mahasoa ny rehetra ny filokàna volabe – na ho an'ny maro an-isa na vitsy an'isa. Ampiasain'ireo mpanao politika ho fitaovana ity olana ity mba hilazany fa tena mpandàla ny rariny sy masina izy ireo . Tokony HAZAVAIN'ny governemanta tsara ny fandehan-javatra.
Tsy manohana ny filokàna aho toy ny tsy anohanako ny fidorohana. Rehefa tsy mahasoa dia tsy mahasoa. Fa rehefa fomba tsara kosa ny fanaraha-maso ny fandehan'ny Ringgit-ntsika (tenin'ny mpanoratra : sandam-bola Maleziana) sy ny loharanon'ny fidiram-bola ho an'ny governemanta, dia tsy maninona?
19 ora izayJapana